Nezvedu - SHENZHOU GUTA YAAO PUMP INDUSTRY CO., LTD.
SHENZHOU GUTA YAAO PUMP INDUSTRY CO., LTD.
Shenzhou Yaao Pump Maindasitiri Co, Ltd. inyanzvi inogadzira yemhando yepamusoro matope pombi zvikamu, akanyudzwa pombi kupembedza zvikamu, uye hydrocyclone linings, inosanganisa R&D, kugadzirwa uye kutengesa. Iine makore anopfuura makumi maviri ekuziva ruzivo. Akazvipira kupa yakakwira yekupfeka kuramba uye yemhando yepamusoro zvigadzirwa zverabha kune vashandisi vepasirese.
Yedu yekambani slurry pombi yerabha zvikamu inogona kuve inochinjika zvachose neepasirese anozivikanwa marangi 'slurry pombi yerabha zvikamu.
Natural rabha (inotengwa kubva kuMalaysia, Singapore & Thafiand), R26, R33, R08, S01 (EPDM), S10 (NBR), S12 (Nitrile), S21 (Bromobutyl), S31 (Hypalon), S42 (Neoprene).
Photo gallery （Tine zvikamu zvakakwana zvezvipenga）
High yepamusoro rabha muforoma
Isu tiri shamwari yako yaunovimba nayo yakavimbika, mhinduro-yakatarisana mhinduro. Basa redu nderekuwedzera zvakanyanya kugona kwako uye nemutengo unoshanda. Yedu masevhisi anogona kubatsira vatengi kudzikisa mashandiro avo ekushandisa, kuronga kugadzirisa uye kudzikisira nguva yekutaura, maererano nekupfeka kuramba, isu tiri munzvimbo inotungamira. Kubatana kwedu nevatengi kuri kuswedera padhuze uye kureba, uye isu takazvipira kupa mamwe masevhisi mukuvandudza mashandiro uye purofiti.
YAAO inovavarira kuve mutungamiri asina kupokana mumaindasitiri ese atinoshandira.Tinotsvaga kuzivikanwa kwepasirese kwemhando yepamusoro yezvigadzirwa nemasevhisi, maitiro edu matsva uye kuzvipira kwedu kumhinduro dzakagadzikana. Isu redu rekukura rakavakirwa pane kugona kushanda, chigadzirwa uye hutungamiriri hweinjiniya uye yakasarudzika sevhisi yevatengi.
Nemakore mazhinji eindasitiri ruzivo uye ruzivo rwekushandisa pasi pezvigadzirwa zvedu, nyanzvi dzedu dzinoshanda nemumwe mutengi kuona yakanakisa mhinduro. Isu tinogadzira tekinoroji yedu kuti izadzikise zvido zvako uye nekuona kuti zvido zvebasa rako zvinotsigirwa kuti zviitwe zvakanyanya uye kushanda pasina matambudziko.